सिएमसीलाई २१ अर्ब र सिनो हाइड्रोलाई ४ अर्बमा तनहुँ जलविद्युतको ठेक्का ! « GDP Nepal
सिएमसीलाई २१ अर्ब र सिनो हाइड्रोलाई ४ अर्बमा तनहुँ जलविद्युतको ठेक्का !
Published On : 26 July, 2018 6:19 pm
काठमाडौं । निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का इटालियन कम्पनी सिएमसी र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएका छन् ।
नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वक्र्स) निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसी र सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका कामका लागि चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएका हुन् ।
सिएमसीसँग २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता हुनेछ भने सिनो हाइड्रोसँग ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाखमा सम्झौता हुनेछ ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत ७ साउनमा बोलपत्रको नतिजा सार्वजनिक गरी छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानतसहित खरिद सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको छ । दुवै कम्पनीले ८ साउनमा पत्र बुझिसकेका छन् ।
पत्र बुझेको २८ दिनभित्र कम्पनीहरुले कार्यसम्पादन जमानत सहित खरिद सम्झौताका लागि आउनु पर्ने तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रवन्ध–सञ्चालक प्रदिप कुमार थिकेले जानकारी दिए । ‘खरिद सम्झौता भएको दुई महिनापछि काम सुरु गर्ने र सम्पूर्ण निर्माण कार्य डिसेम्बर २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख(प्रशारण लाईन, ग्रामिण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बंैक (ईआईबी)ले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।